Andriamanitra Izay nahary izao rehetra izao dia tompon’antoka amin’ny fiahiana izay nohariany, dia ny famelomana azy sy ny fiarovana azy. Ho amin’izany, dia manao ny adiny amin’ny faharatsiana sy ny fahafatesana Izy, ary mivoaka ho Mpandresy amin’izany. Fa voasoratra hoe : « Fa an’i Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy, Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy » Sal.24 :1. Araka izany, dia Izy no Tompo manam-pahefana amin’izay rehetra nohariany, eny, amin’ny fahavalony koa izay ataony « ho fitoeran-tongony » araka ny Sal.110 :1. Ary dia hoy koa Izy: «Ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny » Isa.45 :11,12.
Araka izany, dia tsy mitoetra mangina, na manentsi-tadìny tsy hihaino ny fitarainan’ny maro tojo ady mafy sy tebiteby lalina Izy, noho ny fihanaky ny valan’aretina izay miteraka voka-dratsy sy fahavoazana tsy roa aman-tany amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona, fa miditra an-tsehatra manatanteraka ny adiny Izy mba hiarovana sy hamelomana azy. Izany dia toy ny namaliany ny antson’ny Isiraely tanatin’ny fahoriana be nianjady taminy noho ny fanandevozan’ny Egyptiana aza, ka hoy Izy tamin’i Mosesy: «Efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon’ny mpampiasa azy; eny, fantatro ny alahelony; dia efa nidina Aho izao hamonjy azy » Eks.3 :7-8a.
Miady ho an’ny olony tokoa Andriamanitra, ary mandresy ho azy ; ary dia mitaona sy manentana izay rehetra vonona sy te-hiray antoka Aminy mba handray ny fiadiana mahomby avy Aminy, ka handresy tahaka Azy koa.
I/ NY ADY ATAO SY NY ANTON’NY ILANA NY FIADIAN’ANDRIAMANITRA
Raha raisina amin’ny ankapobe dia ady roa sosona no atrehina :
ny ady amin’ny aretina izay mbola fantarina ny fomba fiaviany ary mbola karohina ny fomba handresena azy.
miaraka amin’izany indrindra koa dia ny ady amin’ny tsy hita maso, dia amin’ny fanahy ratsy, dia ny devoly sy ny forongony rehetra; eto, dia ny mamorona sy mampiahaka ny valan’aretina. Fa voasoratra hoe « Isika tsy mitolona na miady amin’ny nofo aman-dra (amin’ny olona), fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, dia amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra » Efes.6 :12.
Ny fototry ny fandresena azy roa ireo dia ny fahalalana ny marina, izay hanafaka amin’ny fanandevozan’ny aretina sy ny tahotra ny fahafatesana (Jao.8 :32/ Heb.2 :15).
Araka izany, dia tsara raha tsiahivina mikasika ity valan’aretina « coronavirus » ity, fa miray tendro ny maha-aretina azy SY ny maha-asan’ny devoly azy, dia izy noforonina avy tamin’ny « sain-dalin’i Satana » Apok.2 :24. Fa otrikaretina biolojika no ampiasaina ho fitaovam-piadiana izay hitarika ny valan’aretina na ‘pandémie’, dia ny fihanaky ny aretina mahenika ny tany sy ny firenena rehetra.
Ny fiasany dia entina hamelezana ny firenen-kafa mba handemena azy tsy hanan-kery hahaleo tena intsony, indrindra amin’ny lafiny toe-karena, fa hiankin-doha amin’ny fahavalo izay namely azy. Ny tanjona farany kendreny amin’izany dia ny hanorina ny fanjakan’ny tenany eo amin’izao tontolo izao sy ny hanam-pahefana enti-manapaka ny fiainan’ny olombelona maneran-tany sy ny fizotry ny tantarany.
Ny fototra iorenany ara-panahy dia ny fikomiana amin’Andriamanitra sy ny fanoherana ny Kristiny (Antikristy), ny fangalarana ny toerany sy ny voninahiny (Isa.14 :14), ary ny fanimbana sy fandevonana ny taranaky ny olombelona izay noharian’Andriamanitra hitovy endrika aminy (Gen.1:26).
Andriamanitra mihitsy no Tompon’ny ady sy mitarika izany, fa ny anarany dia « Jehovah », dia Izy « Tompon’ny maro » (Sal.24 :10), Mpitari-tafika mahay sady Mpiady mahery tsitoha (Eks.15 :3 ; Sal.24 :8). Koa dia toy ny manao fanamby Izy raha miteny manao hoe: “Na dia ny sambotry ny mahery aza dia halaina ihany, ary ho afaka ny babon’ny mpandrombaka; fa Izaho no hiady amin’izay miady aminao, ary Izaho no hamonjy ny zanakao. Dia ho fantatry ny nofo rehetra fa Izaho Jehovah no Mpamonjy anao, ary Ilay Maherin’i Jakoba no Mpanavotra anao“ Isa.49:25-26.
Izany dia teny fanomezana toky sy famporisihina ho an’ny mino izay miray antoka amin’Andriamanitra (Jao.14 :12). Hoy i Mama Nenilava mpanompon’Andriamanitra : « Jesosy tia miady satria Mpandresy Izy ». Fa na dia vehivavy aza izy, dia tena nitomban-dahy, ary nampisikina ireo zanany mpiara-miasa akaiky taminy. Koa izay rehetra manaiky ny fahefan’Andriamanitra sy ny fitarihany dia ataony mandresy tahaka Azy toa ny Apostoly Paoly nanao hoe: «Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika ? » Rom.8 :31. Ary koa «Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika » Rom.8 :37. Fa efa nataony ho tempoliny izay rehetra mino Azy, koa «ny vavahadin’ny fianan-tsi-hita tsy haharesy azy» Mat.16 :18b.
Ny adin’Andriamanitra dia anehoany ny heriny sy ny voninahiny ka mandresy ny devoly fahavalony sy izay miandany aminy. Fa voasoratra hoe: “Ary nazera ilay dragona, dia ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao; dia nazera tamin’ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nahare feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe: Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan’Andriamanitsika, Ary ny fahefan’ny Kristiny, Satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay miampanga azy eo anatrehan’Andriamanitsika andro aman’alina“ Apok.12:9-10.
Ady ho fampandrosoana ny fanjakany etỳ an-tany ny adin’Andriamanitra, dia ny fanjakan’ny fahamarinana sy ny fiadanana (Isa.9:6). Izany dia araka ny tonom-bavaka izay nampianarin‘i Jesosy ny mpianany manao hoe: « Ho tonga anie ny fanjakanao ; hatao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra » Mat.6:10.
Tanteraka izany amin’ny alalan’ny fandravana ny fanjakan’ny devoly sy ny fahamaizinany araka ny fiantsoana-fanirahana izay nataon’ny Tompo tamin’i Jeremia manao hoe: «Ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly“ Jer.1:10.
Ny adin’Andriamanitra dia ho amin’ny fiainana sy ny fahavelomantsika olombelona. Izy no Tompo tsy hay resena amin’izany, ka ny fahavalony sady fahavalontsika dia ny devoly izay mpampahory amin‘ny aretina sy ny fahafatesana. Hoy Jesosy: “Izaho no vavahady; raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be“ Jao.10:9-10.
Ny ady atrehintsika dia ady tena lehibe (guerre mondiale), satria maneran-tany sy tsy mifidy izay asiany. Araka izany dia fiadiana mahery vaika sady tena azo antoka indrindra no ilaintsika ho amin‘ izany, dia ny fiadian’Andriamanitra izay omeny antsika rahateo. “Andron’ny adin’Andriamanitra“ ny andro ankehitriny izay anehoany ny heriny sy ny fiandrianany, dia “Andron’i Jehovah izay lehibe sady mahatahotra“ Mal.3:23, anefa indrindra koa “androm-piandrandrana fa efa akaiky ny fanavotan’ny Tompo“ (Lio.21:28). Ho amin’izany dia mibaiko Izy ka manao hoe:
“TAFIO AVOKOA NY FIADIAN’ANDRIAMANITRA“
© D.Rabarihoela Bruno 09.05.20
Serasera: Fb HiFi, GESC Mada.